Isa-minitra Marary Enina No Voatily Fa Tratry Ny Homa-miadana Any Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2013 4:35 GMT
Vakio amin'ny teny Español, polski, Svenska, Português, русский, Català, 日本語, English
Enina isa-minitra ireo marary voatily fa tratry ny homamiadana, marary 8.550 vaovao tratry ny homamiadana isanandro izany, araka ny fanisana mikasika homamiadana tamin'ny taona 2012 (2012中国肿瘤登记年报) [zh]. Voalazan'ny tatitra fa ny 13 isan-jaton'ny mararin'ny homamiadana no ho faty.
Maro no mino fa ny maha-haingana ny fitombon'ny salan'isan'ny mararin'ny homamiadana dia vokatry ny fahalotoan'ny tontolo iainana nanomboka ny folo taona farany nampiroborobo fatratra an'i Shina.
Navoaka tamin'ny janoary 2013 ny tatitra mikasika ny fanisana ny mararin'ny homamiadana, saingy tsy dia noresahana firy. Sahirana nifantoka tamin'ny Fihaonambem-Pirenen'ny Mponina (NPC) sy ny Fanaovana Fakàn-kevitra Politika tamin'ny Vahoaka Shinoa (CPPCC) ny mpilaza vaovao Shinoa.
Ny 7 sy 8 Aprily, na izany aza, navaozin'ireo mpilaza vaovao isan-karazany ho toy ny olan'ny fahasalamam-bahoaka ilay tatitra [zh], niteraka adihevitra mafy ary matetika tora-pò avy amin'ireo sehatra media sosialy tena malaza ao Shina.
Ny mpanadihady iray antsoina hoe Tulao 8 (@土魯8) [zh], avy any Guangzhou, dia niteny tao amin'ny Sina Weibo hoe :
Ny tompon'andraikitry ny tontolo iainana any Shina dia efa nanamafy ny fisian'ny antsoina hoe “tanànan'ny homamiadana” [zh], miaraka aminà vokatra ara-tsimika 3000 mahafaty voamarina ary hita manerana an'i Shina (tsy ao anatin'izany ny angona avy any amin'ny faritra mahaleotena toa an'i Tibet, Xinjiang ary Oinghai.)
Ny filazam-baovao Shinoa dia nitatitra fa farafahakeliny 459 ny tananan'ny homamiadana. Mahalana no ahitana 10 isan-jaton'ny trangana homamiadana fotsiny ao amin'ireo tanàna ireo. Ny ratsy indrindra amin'izany dia ny tanànan'i Zhai Wan Cun any amin'ny faritr'i Hubei ; any ny salan'isan'ny homamiadana dia 80 avo heny amin'ny an'ny firenena manontolo [zh]. Tanàna misy mponina 3000 monja, nefa maherin'ny 100 ny mponina voan'ny homamiadana tao no maty tany tamin'ny taona 2003-2006. Ny salan'isan'ny mararin'ny homamiadana any amin'ny firenena mandroso dia manodidina ny 3 isan-jato.
Mpiblaogy iray milaza ny tenany ho “Tsara kokoa ny mahantra ao an-trano” (@在家貧亦好) ao amin'ny Sina Weibo [zh] no namaritra fa :
Nitsidika ny tanànan'ny fahazazako aho nandritra ny fety ara-kolotsaina tany Qingming, misy maro mararin'ny homamiadana ireo tanàna roa mifanakaiky ary maro no maty vokatr'izany. Ilay tanàna voalohany dia nisy 5 ary ilay iray hafa nisy 6. Betsaka tamin'izy ireo no teo anelanelan'ny 30-50 taona, somary betsaka izany. Ailiky ny mponina any amin'ny haratsiam-bintana ny resaka, nefa tsy maintsy efa nisy zavatra tsy nanjary nitranga tany ho an'ireo tranga marobe teny amin'ireo tanàna ambanivohitra. Tokony hanadihady ilay tranga misy ny tompon'andraikitra.
Iray hafa milaza ny tenany ho “Ravina mena eny antendrombohitra” (@山山紅葉), avy ao Tai An ao amin'ny faritanin'i Shandong, nilaza hoe :
Deng Fei (@鄧飛), mpikatroka iray mafàna fo izay miady amin'ny fahalotoan'ny rano fisotro any Shina amin'ny fanentanana ireo mponina mba hamorona antontan-taratasy mikasika ny renirano voaloto, dia namoaka indray [zh] hafatra manokana iray nalefa taminy avy aminà namana iray mpiserasera :
Ny faripiadidian'i Cang any Hebei no ohatra iray amin'ireo faritra manana salan'isa avo indrindra mikasika ny homamiadana, ary tany aloha tany dia nizaka ny taha avo indrindra mikasika ny fahalotoan'ny rano ambanin'ny tany. Charles Xue (@薛蛮子), mpampiasa vola no nanasongadina [zh] ilay vaovao hoe :
Ny mpampiasa antsoina hoe “Huihui Da” （＠回回達）namintina [zh] tamin'ny filazàna tamim-panesoana hoe :